Mujaahid (Col: Cabdikariin Sheekh Muuse “Qalbi Dhagax”) Ma Laga Yaabaa In Uu Noqdo Madaxweynaha Danbe Ee Dalka Itoobiya?, Odoros Siyaasadeed!! – Codka Qaranka Tanadland
Mujaahid (Col: Cabdikariin Sheekh Muuse “Qalbi Dhagax”) Ma Laga Yaabaa In Uu Noqdo Madaxweynaha Danbe Ee Dalka Itoobiya?, Odoros Siyaasadeed!!
Heesaha Hobalkii Reer Tanadland Ee (Aadan Maxamed Xirsi Gaawe"Aadan Goobe") Oo Aan Hawada U Marinayo Mujaahid "Qalbi Dhagax"
Waxaan rabaa inaan ku bilaabo maqaal kaan baroor-diiqa ah, oo aan ugu boroordiiqayo halgamaaga weyn ee Soomaaliyeed ee geesiga ah oo cadowga loo gacangeliyey. Mujaahid (Cabdikariin Sheekh Muuse “Qalbi Dhagax”). Waxaan marka hore ka afeefanayaa o aan qirayaa, in dad ka reer Tanadland aysan jeclayn fanaaniinta iyo fankaba. Heesaha Soomaalida na aan guri dhif iyo naadir ah mooyaane aan laga shidin guryaha dadka reer Tanadland. Dadka reer Tanadland aragti ahaan gabadha iyo wiilka fanaanka noqda, waxay ka aaminsanyihiin inay yihiin awlaad fasahaadey.
Saas daraadeed, reer Tanadland kuma’ay lahayn wax fanaaniin haba yaraatee kooxdii waaberi. Walow ay jereen dhawr nin oo majaajiliisteyaal ah oo reer Tanadland ah, oo ku jirey kooxda waaberi. Balse kooxda fanaaniinta Horseed ee xooga dalka Soomaaliyeed, alifaaga ugu weyn oo riwaayadaha iyo heesaha u alifa wuxuu ahaa (Col: Cago Beled), oo ah nin reer Tanadland ah. Fanaanka ugu caansan fanaaniinta heesaha ee kooxda Horseed na wuxuu ahaa (Aadan Maxamed Xirsi Gaawe”Aadan Goobe”).
Dabcan saad la socotaana, abwaan (Col: Cago Beled) iyo 3 xidigle fanaan (Aadan Goobe) waxay ahaayeen labo nin oo beel hoosaad isla ah. Kana soo jeeda beesha (Axmed Muumin). Arinta layaabka leh waxa weeye dadka reer Tanadland aad bay u jecelyihiin fanaaniinta cayaaraha iyo heesaha hidaha ama dhaqanka ah. Ee waxa ay necebyihiin heesaha kale oo loo badanyahay, oo ay u arkaaan basarxumo iyo wax aan munaasib ahayn inay yihiin.
Hadaan wax ka iraahdo falka wuxuushnimada ah ee lagula kacay mujaahid (Cabdikariin Sheekh Muuse “Qalbi Dhagax”). Waa arin aad u foolxun oo saameyn weyn ku yeelan doonta kala taga umada Soomaaliyeed, oo hadaba kala qob-qoban oo aan qumaati u wada jirin.
Mujaahid (Col: Cabdikariin Sheekh Muuse “Qalbi Dhagax”) ugu horayn wuxuu ahaa muwaadin soomaaliyeed. Wuxuu ahaa sargaal sare oo ka tirsanaa ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed. Wuxuu kaloo ka mid ahaa taliyeyaashii hogaaminayey ciidamada XDS dagaaladii 1977. Mujaahid (Col: Cabdikariin Sheekh Muuse “Qalbi Dhagax”) labo dagaal ayuu ku dhaawacmay isaga oo difaacaya ciida iyo sharafta Soomaaliyeed. Mujaahid (Col: Cabdikariin “Qalbi Dhagax”) dagaalkii hore ee uu ku dhaawacmay wuxuu ahaa dagaalkii 1977 ka. Dagaalkii labaad ee uu ku dhaawacmay waxuu ahaa degaanka Gobalka Xariir
sanadkii 1981-kii. Markii itoobiyaanku ay soo weerareen Gobalka Xariir Iyo Balanbale.
DDS Siday Uga Faa’iideysan Karaan Imaatinka (Col: “Qalbi Dhagax”) :
Degaanka ismaamulka Somalida ee Ogadenia wuxuu intii uu xilka hayey madaxweyne (Cabdi Maxamuud Cumar), cimrigiisa iyo hogaan kiisaba allaha raajiyee. Wuxuu ku talaabsaday horumar balaaran oo dhan kastaba ah. Waxqabad kaasina maaha wax qoraal lagu soo koobikaro. Geyiga Ogadenia 4 sanadood ka hor, madaxweyne (Cabdi Maxamuud Cumar) wuxuu ku kordhiyey 18 degmo.
Sanadkii hore ee 2016 ka intii ka horeysey gobalka keliya ee 9 -ka gobol ee u geyiga Ogadenia ka koobanaan jirey, beesha aan Ogaadeen ahayn oo gobal gooni u lihi waxay ahaan jirtey beesha (Ciise). Beeshaasoo degta gobalka Shiniile. Laakiin bishii 2-aad ee sanadkii 2016-ka dowladda madaxweyne (Cabdi Maxamuud Cumar) waxay samaysay 48 degmo iyo 3 gobol oo cusub. Taasoo suurogelisey in beesha Mareexaan ay saami u hesho gobol iyo 2 gobol bar kood.
Guushaasna waxaa laysku raacsanyahay inay u sabab yihiin halgankii dheeraa ee ay naftooda u soo hureen, halgameyaashii wiilasha iyo gabdhaha Ogadenia ee jabhadda ONLF. Beesha Ogaadeen iyo beelaha kale ee degaanka Ogadenia ku weheliyaba, dantoodu waxay ku jirtaa jiritaanka garabka siyaasadda ee jabhadda ONLF. Laakiin hada iyo wixii ka danbeeya waa axmaqnimo in wax xasarad ah laga sameeyo degaanka xorta ah ee Ogadenia.
Hadaan fursad u heli lahaa aan kula kulmo Madaxweyne (Cabdi Maxamuud Cumar), horta marka ugu horaysa waxqabad badnida iyo in uu yahay hogaamiye waxtar badan oo dad kiisu ay ku diirsadeen baan ugu hambalyeyn lahaa. Marka xigtana waxaan ku guubaabinlahaa, in sidii wiilashii Ogaadeen ee Dhebayaco iyo Iidoor ay tigreega u dhiibeen. Sidii uu tigreega uga soo daayey si la mid ah in uu (Col: Cabdikariin “Qalbi Dhagax”) na u soo daayo. Oo u weliba dowladda dhexe ee Itoobiya iyo dowlad deegaanka midkood uu wasiir muhiim ah uga noqon lahaa.
(Col: Cabdikariin “Qalbi Dhagax”) waa nin miisaan culus leh oo mayal adag, horeyna u soo ahaanjirey taliyaha ciidamada Jabhadda ONLF. (Col: Cabdikariin “Qalbi Dhagax”) waa nin Itoobiya ay mudo dheer raadineysey inay la heshiiso. Taliyihii hore ee ciidamada ONLF mujaahid “Qalbi Dhagax” waa nin aad u caqli badan. Ogaadeen haduu kuligiis isdhiibo oo u itoobiya la heshiiyo shidaalka Ogadenia ku jira waa hore ayaa la bililiqaysan lahaa. Ciidamada ONL ayaana u sabab aha in shirkadihii shiinayska ahaa ee Itoobiyaanku u keeneen Ogadeni si ay shidaal uga soo saaraan, inay ka cararaan degaanka Ogaadenia oo ay isku aamini waayaan. Kedib markii ciidamada ONL ay dhawr jeer weerareen oo maxaabiis ka qabteen.
Waxaana suuragal ah marka “Qalbi Dhagax” oo ka wakiil ah garabka ONLF ee aan weli dowladda dhexe la heshiin, in siyaasiyiinta dowladda geyiga Ogadenia iyo ONLF ay kula gor-gortamaan tigreega. In “Qalbi Dhagax” xisbiga talada Itoobiya haya ee (EPRDF) ay u sharaxaan madaxweynaha soo socda ee dalka Itoobiya. Si nabad waarta ay uga dhalato geyiga Ogadenia. Mar hadii (Col: Cabdikariin “Qalbi Dhagax”) uu dowladda Itoobiya u soo gacangalay. Ogaadeen wuxuu helay farsad qaali ah!!.
Tigreega waa in heshiis buuxa lala galaa. Madaxweynaha soo socda ee Itoobiyana waa in uu noqdaa madaxweyne (Col: Cabdikariin “Qalbi Dhagax”).
Marka xigtana, Madaxweyne (Cabdi Maxamuud Cumar) waa an canaanan lahaa oo waxaan ku oranlahaa “War wax yohow axmaqa ahi beesha (Makaahiil) maxaad gobal u gooniya aad ugu magacaabiweydey”. Beesha (Makaahiil) waxay ahayd beesha ciidamada 3-aad ee ugu badan weligeed ku lahaanjirtey, ciidamada xaq u dirirka ah ee Jabhadda ONLF. Oo ku xigta beelaha (Reer Cabdile) iyo (Reer Isaaq) xaga tirada ciidamada jabhadda ONLF. Intaas waxaa u weheliyey beesha (Makaahiil) dhib culus oo gooniya, oo beesha (Makaahiil) ka soo gaarey halganka xoreynta geyiga Ogadenia. Beesha (Makaahiil) waa beesha Isimada ugu badan looga laayey halganka xoreynta. Waxaana lama huraan ah hada hadii uu dalku nabad noqday in beesha (Makaahiil) qaderinta ay mudantahay la siiyo.
Aniga oo qadarin weyn u haya mujaahidka weyn ee halgamaaga (Col: Cabdikariin “Qalbi Dhagax”), kuna rajo weyn in la soo gaarey wakhtigii uu madaxweyne ka noqonlahaa dalka Itoobiya. Waxaan jeclaan lahaa inaan hawada u mariyo oo aan maqashiiyo heeso wadani ah oo dib u xusuusiya waayihii u soo maray. Haday ahaan lahayd isagoo ku jira furinta dagaalka. Iyo haday ahaan lahayd isaga copajino ku cabaya dabaqa sare ee xarunta saraakiisha XDS ee Shirkolo-officiale. Heesihii uu ka maqlijirey golaha filimada iyo xafladaha ee Shirkolo-officiale. Marka kooxda Horseed ay carbis ku saabsan bandhig faneed ay samaynayaan.